Rishi Chandarana tany amin’ny volana jona, ary taty amin’ny 21 novambra 2018 dia nisy an-dry Arman Kamis, tany Toamasina, ka i Haja Manantena izay efa navotsotry ny fitsarana no voatonona ho atidoha. Nisy ny fepetra noraisin’ny mpitandro filaminana. Nahomby ve ny paikady ? Fifanandrifian-javatra ihany ve ny fitsaharan’ny fakana an-keriny taorian’ny fahavitan’ny fifidianana ? Raha ny loharanom-baovao, nandrahona ny hampikatso ny toekarena teto ireo vondron’ny karana noho ny karazana afobe zakainy sy ny fahatsapana fa volosana amin’ny alalan’ny fitakiana volabe tamin’ny fakana an-keriny ka voafehy ho azy. Efa nivory mangina haneho ny heriny ary mbola mitazona ny heviny izy ireo fa vao misy zavatra manohintohina azy dia hampikatso ny toekarena. Izy ireo no mifehy ny sehatra ara-bary eto. Ny tontolon’ny herinaratra eo am-pelatanany amin’ny alalan’ny Filatex-Enelec, Symbion-Vima, First Energy, Hydelec,… izay mpamatsy ny Jirama. Ny tontolon’ny solika, eo am-pelatanany ka misy ny misehatra amin’io no mamokatra herinaratra. Ao koa ny tambajotran-tserasera eto amintsika. Ny banky dia saika an’ny karana ny ankamaroany, toy ny BNI, BGFI Bank, BMOI, Microcred Baobab, Ny indostria samihafa dia azy ireo ny ankamaroany eto. Ireny “quincaillerie” matanjaka be eto ireny, dia saika an’ny karana. Ny any amin’ny ladoany sy ny fitaterana mifandraika amin’izany dia efa hanjakany. Afaka manao takalon’aina ny toekarena izy ireo ankehitriny. Mandrahona ny tsy hiasa, tsy hivarotra ao anatin’ny herinandro, vao voatohintohintohina ary efa namotopototra lalina an’io fa tsy maty antoka ao anatin’io fe-potoana io. Loza sy mampikorontana firenena kosa raha ny famatsiana solika, ny serasera rehetra, ny banky,… no mikatso eto. Mety izay no mampandamoka ny adihevitra mahakasika ny solika izay nambaran’ny filoha fa hampidininy. Mihamafy hatrany ny mpandraharaha karana eto. Ny Malagasy anefa miady na ampiadiana noho ny resa-politika sy ny fitiavan-tena.